FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA KOKILA - ALIKA
Alika mikambana mifangaro ny Pekingese / Cocker Spaniel
'Ity i Luna, ny Cockinese antsika, eo amin'ny 3 volana. Izy dia antsasaky ny Pekingese ary antsasaky ny Cocker Spaniel. Nentina izy 1-2 mandeha isan'andro ary lalaovina tsy tapaka. Mikarakara ny fampihetseham-batany rehetra io. Avy amin'ny fako no hany alikany nanjary loko 2 samy hafa. Ny rahalahiny sy ny rahavaviny dia mainty avokoa na sôkôla. Te hilalao foana izy ary nanaporofo sarotra vaky trano . '
Tsy alika madio ny Cockinese. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pekingese ary ny Cocker Spaniel . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Cockinie
Mpanoratra International Canine Registry®= Cockinese
Drafitra mpamorona endrika = Cockinie
'Ity no Reagan, zanak'alika kokokay ao anatin'ny 5 volana… talohan'ny volon-dohany voalohany. Tsy nilatsaka be izy, fa noho ny toetrany mpanafika dia hahazo ranon-kesika sy zavatra hafa mifikitra mafy amin'ny volony izy rehefa milalao any ivelany. Raha miresaka any ivelany dia tiany ny mivoaka, tia mihazakazaka, nefa mankahala ny irery. Raha any ivelany irery izy dia hipetraka eo ivelan'ny varavarana ary hikotrika mandra-pitondrako azy miditra. Raha mbola miaraka aminy ny rahavaviny Lady dia tsara ny milalao any ivelany mandritra ny ora maro.
'Manana biby fiompy 4 izahay, Reagan no zandrinay indrindra. Matetika mijery an'i Cesar isika ary mampihatra ny teknikan'izy ireo amin'ny alika (sy saka) ... ny anay saka tonga rehefa antsoina, mipetraha ary miandry ny sakafony ary miditra na avelao ny efitrano rehefa takiana. NY alika fantany ihany koa ny mahasamihafa ny haingana sy ny miadana, miandry ny sakafony am-pitoniana izy ireo, ary mahafantatra ny anaran'ny efitrano rehetra ao an-trano ary hanatona azy ireo rehefa angatahina. Izy ireo koa dia manolotra, mipetraka, mihozongozona, tonga, mandry, miteny ary mitsambikina rehefa takiana. Miaraka amin'ny biby fiompy efatra sy zanaka 2, ny tranonay dia mbola trano milamina, ary mino aho fa satria ny biby dia mahatsapa fa ampahany lehibe amin'ny fonosana izy ireo, nefa tsy mila mandray ny andraikitry ny fonosana amin'ny maha-mpitarika azy.
'Tsy mbola nandre momba ny fifangaroan'ny Cockinese izahay talohan'ny nividianany an'io alika kely io, fa nahita azy ho alika tia olona sy tia olona toy izany. Manana fihetsika izy indraindray, fa tsy ratsy toetra mihitsy, tsy mankatoa (toy ny alika kely rehetra). Fanampiny mahafinaritra ho an'ny fianakavianay izy. 22 lbs izy izao. ary mbola mitombo ihany. '
'Ity no alika Zeke alohan'ny nahatongavany herintaona. Cockinese izy, ny rainy dia Cocker Spaniel purebred, ary Pekingese purebred no reniny. Zeke tena alika, mahafinaritra ny toetrany. Mety ho kely izy nefa hanao alika mpiambina tsara. Ivelan'ny fehy mivovo amina olona akaikin'ny trano izy fa mijanona rehefa lazaina aminy fa ampy izay. Tiany ny milalao kilalao , maka, tos-of-war, fa hitsambikina eo am-pofoananao koa izy ary hipetraka, na hihinana eo akaikinao ary hatory. Zeke dia milalao an-tokotany isan'andro ary mahazo mandeha an-tongotra dimy, fara fahakeliny . Ny olana tokana ananantsika dia ny tiany mitsako zavatra fa efa nandroso be izy ary fantany fa ny kilalao no atao hitsakoana. Nanampy azy tamina ankohonana iray saka roa izay tsy zatra azy dia nifanaraka tsara. Fantatr'i Zeke ny hamela irery ny saka tranainy indrindra, fa ny saka tanora kokoa izay 2 taona eo ho eo dia tia milalao amin'i Zeke ary hitako mihintsy izy ireo indraindray. Hainy ny manao mipetraha, mandry, mihozongozona, avo dimy ary miteny . Hatramin'ny vanin-taona mafana dia tsikaritro fa tena mampientanentana an'ireo gilasy i Zeke. Tiany ny mihodina ary manenjika azy ireo mandra-piempoany. Zeke, izay alika voalohany nanampy ny fianakaviana, no lehibe indrindra. Ny dadako dia tsy nahafantatra an'io hevitra io fa nitia azy. Zatovo aho ary mety ho sahirana ny fiainako saingy tia biby aho ary maniry alika hatramin'ny tadidiko, ary mieritreritra aho fa tsy afaka mangataka izay tsara kokoa. '
Soso-tsofina ny alika olon-dehibe Cockinese (Alika Cocker / Peke mifangaro) amin'ny 5 taona
Alika kely Cockineses (zanak'ondry Pekingese / Cocker Spaniel mifangaro) Mpanjaka mandritra ny 6 volana ary Gizmo mandritra ny 2 volana - samy sable sy partis fotsy. Sary natolotry ny Dakota Winds Ranch
Alika kely Cockinese (alika mifangaro mixing Espaniel avy any Pekingese / Cocker) Taz, merle manga sy fotsy fotsy lahy atody mandritra ny 2 volana — ity pup ity dia manana iray maso manga . Sary natolotry ny Dakota Winds Ranch
Alika kely Cockinie (alika akora mampifangaro Pekingese / Cocker Spaniel) tamin'ny faha-7 herinandro, sary nahazoana alàlana avy tamin'i Dakota Winds Ranch
Ozzy, alika mainty Cockinese (alika alikaola Espaniôla Cocker / Cocker Spaniel) alika mandritra ny 2 volana, sary natolotr'i Dakota Winds Ranch
Alika kely Cockinese (Cocker Spaniel / Pekingese) amin'ny 8 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Cockinese
Sarin'ny fiompiana alika kokila
Lisitry ny alika mitambatra Pekingese
Lisitry ny alika mpihetsiketsika Spaniel mifangaro
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull Jack
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Boston Terrier
Fampahalalana sy sary miteraka alika Corkie Dog
Doberman Pinscher Dog Fampahalalana sy sary
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull Arab
inona ny alika mpamorona
amidy lance bulldog maimaim-poana
bichon frize sy king charles mifangaro
pug yorkie afangaro amidy
amerikana pitbull terrier black lab mix
chow chow alemania mpiandry mix
mpiandry ondry aostraliana sy mix chihuahua